အမျိုးသားတို့အတွက် အရေးကြီးသော ဆေးစစ်ချက်များ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေနဲစာရင် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းတွေ သွားပြတာ နည်းတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုတွေကို မလုပ်ဖြစ်တာ များပါတယ်။ ပုံမှန်ဆေးစစ်ခြင်းအားဖြင့် ရောဂါကို စောစောသိပါက စောစော ကုသနိုင်တဲ့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ အောက်ပါတို့ကတော့ အမျိုးသားတို့ အမြဲပုံမှန် စစ်ဆေးသင့်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ စစ်ဆေးချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
2. သွေးတွင်းအဆီဓာတ် စစ်ဆေးခြင်း
3. ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ စစ်ဆေးခြင်း
4. အူမကြီးကင်ဆာ စစ်ဆေးခြင်း
5. အရေပြားကင်ဆာ စစ်ဆေးခြင်း
6. ဆီးချို စစ်ဆေးခြင်း
Dr. Mya Myo Myo Swe (drmyanmar.com)